Mogadishu Journal » 2018 » May » 16
IMF”Dowladda Soomaaliya waxaa ay ku guuleystay in horumaro badan ay ku talaabsato”
Mjournal :-Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka Maaliyadad Soomaaliya iyo wafdka ka socoday Hay’adda lacagta Adduunka ee IMF,kulankaasi oo daba socday dadaalada dowladda...
War murtiyeed laga soo saaray shirkii Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada
Mjournal :-Shirkii Madaxda dowlad goboleedyada uga socday magaalada Baydhabo ayaa la soo gabagabeeyay, kaasoo laga soo saaray war.murtiyeed ka kooban dhowr qodob. Shirkan oo ahaa kii labaad oo ay yeeshaan Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa golaha waxay kaga hadleen...
Mjournal :-Ciidamada booliska dalka Indonesia ayaa toogtay Afar oo ay sheegeen in ay Weerar kusoo qaadeen Saldhig ay leeyihiin Ciidamada Booliska dalkaasi. Falkaan ayaa ka dhacay Saldhigga ciidamada Booliska ee Jasiiradda Sumatra. Afhayeenka Ciidamada Booliska gobolka ayaa...
Mjournal :-Wararka saakay inaga soo gaaraya degaanka Tukaraq ayaa waxa ay sheegayaaan in saakay xaalad deganaansho laga dareeymayo halkaasi, oo uusan jirin dagaal socda. Warar ay Idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho heshay ayaa sheegaya in xalay markale uu dhacay dagaal u...
Mjournal :-Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday degaanka Tukaraq oo ay isku heystaan ciidan ka kala tirsan maamulada Somaliland iyo Puntland. Shalay oo ugu dambeysay waxaa dagaal uu dhexmaray ciidanka Somaliland iyo...